Amandla - AOOD Technology Limited
Namuhla, umoya ungenye yezobuchwepheshe bamandla ezikhula ngokushesha. Amandla omoya afaka ukuguqula amandla omoya abe ugesi ngokusebenzisa imishini yomoya. I-AOOD ithuthukise iminyaka eminingi yolwazi lokusebenzisa kuma-wind turbines futhi yaba nempumelelo enkulu ekunikezeni izinhlelo zokulungisa eziphansi kakhulu ezindaweni ezinzima.
Izindandatho ze-Slip zisetshenziselwa ukuhlinzeka ngesiginali kagesi namandla we-blade pitch power and control. Kuhlelo lwe-hydraulic, iringi eshelelayo nenyunyana ejikelezayo ejikelezayo idinga ukuhlanganiswa ukunikeza amasiginali amaningi,
ukudluliswa kwamandla kagesi nogesi wokubacindezela we-hydraulic blade pitch actuation. Kuhlelo lukagesi, idinga indandatho eshelelayo enamasekethe wamandla aphezulu adlulisa amasiginali namandla kagesi wokwenza i-blade pitch actuation.
Indandatho eshelelayo yamandla aphezulu iyadingeka ukuhlinzeka ngokudluliswa kwamanje okuphezulu kokunika amandla amakhoyili we-rotor ohlelweni lokushayela oluqondile. Ngokwengeziwe, ukuhlangabezana nezidingo zemihlangano yamaslip ehlanganisiwe, izindandatho ze-AOOD zingafakwa nama-encoders kanye nama-resolution, amalunga e-fiber optic rotary, izinyunyana ezijikelezayo zamanzi kanye namajoyini weRF rotary.
Njengoba umholi womhlaba wonke kumasongo wezilayidi efakwe, i-AOOD ithuthukise ubuchwepheshe bokuhambisa othintana nabo oqinisekisa ukuthi izindandatho zamandla okushushumbisa umoya we-AOOD zinamarounds angaphezu kwezigidi eziyi-100. Futhi zenzelwe ukufanisa imvelo enokhahlo, zingamelana nokushisa okuphezulu kakhulu noma okuphansi, ukuhlasela kwesihlabathi nothuli nokugqwala kwamanzi olwandle.
Imikhiqizo letihlobene: Custom Slip Izindandatho